ဗီဒီယို အစီအစဉ်ဖြင့် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ - သင့်ဖုန်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုပါတနာ များကို လွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
ယခု ဗီဒီယိုအစီအစဉ်မှာ တယ်လီနောရဲ့ ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုပါတနာများရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူများ လိုအပ်သောပမာဏအတိုင်း အဆင်ပြေစွာ ချိန်ဆသုံးစွဲ နိုင်ရန်အတွက် ရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် တယ်လီနောရဲ့ video partners တွေဖြစ်တဲ့YouTube , Pyone Play နှင့် Byscote မှ video များအားစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ၃၀မိနစ်စာ ၂၀၀MBကို ၃၁၅ ကျပ်(အခွန်ပါပြီး) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ပါတနာအသစ်များလည်း မကြာခင်မှာထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Video Data Pack ၏ သက်တမ်းမှာ ၂၄နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။သင့်ဖုန်းဖြင့် တေးသီချင်း၊ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုများကို တယ်လီနော၏ပါတနာများထံမှ လွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
၂၀၀ မီဂါဘိုက် ၃၁၅ ကျပ် ၂၄နာရီ
Daily Video Pack သည် တယ်လီနောရဲ့ prepaid users များအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Daily Video Packရဲ့ စျေးနှုန်းက တော့ ၃၁၅ကျပ် (အခွန် ပါဝင်ပြီး) ဖြစ်ပါတယ်။
Daily Video Pack တွင် ၂၀၀ MB အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပါရှိပြီး သက်တမ်းမှာ ၂၄ နာရီဖြစ်ပါသည် ။ တယ်လီနောနှင့်တရားဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော application / website များကိုအသုံးပြု လျှင် 1MB ကို 1.5 MMK နှုန်းဖြင့် အခွန်ပါ၀င်ပြီး Daily Video Pack မှ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသော partner များမှာ Youtube, Pyone Plan , Byscote တို့ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်ခ ( service subscription fees) များ ပါ၀င်မည်မဟုတ်ပါ ။ Subscription fees များကို partner များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သက်ဆိုင်သည့် Channel အသီးသီး မှပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည် ။
Byscote အတွက်သာ ၀န်ဆောင်ခ ( service subscription fees) ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကနဦး မှတ်တမ်းတင်သူများအတွက် ရက် ၃၀ တိတိ အကန့်အသတ်မရှိ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤ pack၏ ကြာချိန် သတ်မှတ်ချက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စမ်းသပ်မှုများပေါ်အခြေခံထားပါသည်။
Telenor Myanmar 4G ကွန်ယက်ပေါ်ထွင် partner ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို မူလ bit rate ဖြင့် အချိန်အတိုင်းတာ တစ်ခုထိ အသုံးပြုပြီး ထိုအသုံးပြုချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Pack၏ ခံစားခွင့်တွင် ပါဝင်သော ခွင့်ပြုသည့် ဒေတာပမာဏ ကိုအသုံးပြုပြီး Streaming အရည်အသွေး နှင့် Bit Rate ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော streaming pack ကြာရှည်ခံချိန်တို့ ကွာခြားချက်သည် Telenor နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
မိမိ၀ယ်ယူထားတဲ့ Daily Video Pack ၂၀၀MB ကုန်ဆုံးသွားပါက ပုံမှန်နှုန်းထားအတိုင်း ဆက်လက်ကောက်ခံ သွားပါမည်။
အကယ်၍ Daily Video Pack တစ်ခုထက် ပိုပြီး ၀ယ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျန်ရှိသော pack အကျိူးကျေးဇူးနှင့် pack အသစ်အကျိူးကျေးဇူး နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုခွင့်သက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင်မည်။
Daily Video Pack ရဲ့ ကျန်ရှိနေသော data များကို မသုံးလိုက်ရဘဲ ကုန်ဆုံးသွားပါက ထိုအကျိူးကျေးဇူးများဟာ Daily Video Pack အသစ်ကို roll-over ဖြစ်သွားမှာပါ။ (ပထမ pack ကုန်ဆုံးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ယ်ယူမှုများသာ)
Daily Video Pack ဆိုတာ ဘာလဲ?
Daily Video Pack ဟာ video များကို အဆင်ပြေစွာ နားထောင်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော pack တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ pack ဟာ 315Ks သာ ကျသင့်ပြီး ၂၀၀MB ပါ၀င်သည့်အတွက် ၃၀ မိနစ်ခန့် ကြာ video ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံ streaming quality ကြောင့် ပုံမှန်ထက် ပို၍ လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Streaming Quality ကို SD သို့ ပြောင်းထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
Daily Video Pack ကို ဘယ်လို ၀ယ်နိုင်သလဲ?
USSD code *979*2*7*1#
Daily Video Pack က ဘယ်လောက် ကျသင့်မလဲ?
ဒီ pack ဟာ 315Ks သာ ကျသင့်ပြီး ၂၀၀MB ပါ၀င်သည့်အတွက် ၃၀ မိနစ်ခန့် video များကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Daily Video Pack ရဲ့ သုံးစွဲခွင့် သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Daily Video Pack သုံးစွဲခွင့်သက်တမ်းဟာ ၂၄ နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ pack ဟာ 315Ks သာ ကျသင့်ပြီး ၂၀၀MB ပါ၀င်သည့်အတွက် ၃၀ မိနစ်ခန့် video များကို ကြည့်ရှုခံစား နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ဝယ်ယူမည့် Daily Video Pack မှ သုံးစွဲခွင့်များမှာ လက်ကျန် pack အဟောင်းမှ သုံးစွဲခွင့်များနှင့် ပေါင်းစည်းသွားမှာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလမှာ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့် အစီအစဉ်သစ်၏ သက်တမ်းကာလအထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Daily Video Pack ကို ဘယ် partner application တွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပြီလဲ?
Daily Video Pack ကို partner application များဖြစ်တဲ့ YouTube, Pyone Play, Byscote တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ partner အသစ်များ အနာဂတ်တွင် တိုးလာဖို့ ရှိပါတယ်။ အထက်ပါ partner များရဲ့ application တွေကို Google Play Store သို့မဟုတ် App Store တွင် download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Partner ၀န်ဆောင်ခ (service subscription fees) ဘယ်လောက် ကျမလဲ?
တစ်ချို့ partner တွေက အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရရှိ၍ တစ်ချို့ VIP access တွေအတွက် ၀န်ဆောင်ခ အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ်ကတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Video Streaming ဝန်​​ဆောင်​မှုကို အသုံးပြုဖို့ ကုန်​ကျစရိတ်​ကဘယ်​​လောက်​လဲ?
Youtube လိုဝန် ဆောင် မှုမျိုးက တော့ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ် ။
Byscote : Premium content တွေကို လစဉ် ကြေး ပေးသွင်း ရမှာဖြစ် ပါတယ် ။ အပတ် စဉ် - ၃၁၅ကျပ် (အခွန် ပါပြီး)
ဖော် ပြပါ application များကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းများတွင်သွင်းဖို့ မီဂါဘိုက်အနည်းငယ် ကုန်ကျမှာဖြစ် ပါတယ် ။ streaming ဝန် ဆောင် မှုအတွက် သတ် မှတ် ဒေတာကျသင့်ငွေ ပေး ဆောင် ရမှာဖြစ် ပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် ကုန် ကျစရိတ် အသက် သာဆုံးဖြစ် စေရန် daily video pack သို့မဟုတ် Data Suboo ကိုဝယ် ယူအသုံးပြုဖြို့ အကြံပြုပါရ စေ။